guta : Geelong
inotangwa : 1974
Musakanganwa kuti discuss Deakin University
Deakin University ari pachena yunivhesiti vanenge 50,644 dzidzo vadzidzi 2014. dzakasimbiswa 1974, Yunivhesiti ainzi pashure mutungamiri Australian Federation rwokufamba wechipiri Prime Minister rwacho, Alfred Deakin. Rine pazvikoro muna Geelong, Warrnambool uye Burwood, Melbourne uye nekudzidza nzvimbo muna Dandenong, Craigieburn uye Werribee, all in the state of Victoria. Zvakange pamutemo hwakagadzwa muna 1974 pamwechete ndima Deakin University Act 1974. The sale ofStonnington Mansion provoked public outrage as it involved the mansion which was at risk of redevelopment by property developers. Deakin ndomumwe Australia zviri kukurumidza kuwedzera tsvakurudzo mumayunivhesiti. Its aibatanidza pakutsvakurudza mari yakanga yawedzera kubva miriyoni A $ 4.5 iri 1997 mamiriyoni A $ 43.4 mu 2014.
Kuburikidza zvakarongwa URARAME ramangwana, Deakin ndehwokuti kuvaka mabasa nezveramangwana, kushandisa mikana yose digitaalinen zera kuti vawedzere kuwana dzidzo uye mutsauko kuti nzanga rinoshanda.
Deakin anoitiswa nomukurumbira wokuva pindika, anobatsira uye ushamwari. It ane longstanding rekodhi kushandisa kwainoita cheka-kumucheto mashoko michina apo kupa zvikuru munhu zvichienderana zvakaitika, kana mugore pamusoro Deakin kuti nhau-vapfumi pazvikoro kana kuburikidza mubatanidzwa gore uye kembasi kudzidza.
Deakin ane pamusoro 53,000 vadzidzi, with almost a quarter choosing to study wholly in the cloud (paIndaneti).
Deakin akanga paakavapa ane 5-nyeredzi Rating maererano nomukurumbira payunivhesiti chepamusoro sangano Quacquarelli Symonds (QS); the rating indicates Deakin is world-class in a broad range of areas, ane nokuveza-kumucheto zvivako uye dzemunyika raizivikanwa kutsvakurudza uye nokudzidzisa.
The 2015 Shanghai Jiao Tong Academic chepamusoro Yenyika Africa(ARWU) akaisa Deakin University pakati pamusoro 400 mumayunivhesiti munyika. The ranking compares the research impact of thousands of academic institutions worldwide and has a particular focus on science. For a young university like Deakin which researches across a full range of disciplines and has strong focus on teaching excellence, ari chepamusoro inoratidza mberi Deakin kuzvipira kukura nyika kutungamirira tsvakurudzo.
Deakin ranks 36 muna QS chepamusoro pakati mumayunivhesiti kwenyika pasi 50 makore.
Deakin zvino pamusoro 3% pakati mumayunivhesiti dzenyika imwe neimwe vatatu zvikuru munyika dzakawanda rankingsAcademic chepamusoro Yenyika Africa (ARWU), Times yepamusoro uye QS World University Rankings.
Mu 2015 Nounyanzvi Research nokuda Australia (MUNGUVA) chepamusoro, 89% kutsvakurudza Deakin yakanga yavose sezvavakatarirwa panguva kana kupfuura mwero nyika. Vashanu vanotsvakurudza Deakin pavakapararira waibatanidzwa Thomson Reuters wegore vanonyorwa nevatsvakurudzi vakawanda yataurwa kwomudzidzi mumagazini, ranked in the top one per cent of researchers in their field. The listed researchers are: Alfred Deakin Vanapurofesa David Crawford, Jo Salmon, Kylie Ball uye Sangana Professor Anna Timperio, zvose kubva Deakin kuti Centre Webasa muviri uye Nutrition Research (C-Pan), uye Professor Alfred Deakin Michael Berk, Director of Centre nokuda Innovation muna Mental Nokusangana Health uye Clinical Zvokurapa (ZVAZVAKABATSIRA).
Deakin anopfuurira kuva chikamu mutungamiri nokuda akapedza kugutsikana, first in Victoria for the sixth consecutive year in the Australian Graduate Survey (2010-15).
Rorusununguko Science, Engineering and Built Environment
Deakin University was formally established in 1974 pamwechete ndima Deakin University Act 1974.
These mergers enabled Deakin University to grow substantially from a pre-merger student population of approximately 8,000 mu 1990 to approximately 25,000 dzidzo vadzidzi 1995.
Unoda discuss Deakin University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Photos: Deakin University pamutemo Facebook